”बिश्वप्रकाश” बीपी बन्ने कि देउवाको कार्यकर्ता ? « Pana Khabar
”बिश्वप्रकाश” बीपी बन्ने कि देउवाको कार्यकर्ता ?
समय : 6:49 pm
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मुलुकभरी कांग्रेस हार्दै गर्दा कांग्रेसको हारको बहस कांग्रेस भित्र बाहिर देखी सामान्य मानिस हरुमा पनि देखीएको छ । मङ्ग्तिकार आफै एक दिन एक बिहानै चिया पसलमा छिर्दै गर्दा केहि नागरिक गुनगुनाउदै थिए । म नजिकै गएर बसे, त्यसैमा एकले भने कांग्रेसको पछिल्लो राजनीति गतिविधिले गर्दा यो सोचे भन्दा कम परिणाम आयो । यसैमा जोड्दै अर्का ब्यक्तीले भने कांग्रेसको निर्वाचनमा जाने चुनावी नारा नै गतिलो भएन । बाकी अन्यले सभापति देउवाको ७ पटक प्रधानमन्त्री हुने भबिस्यबाणी र साझा सवालको समेत कुरा गरे । यसरी सर्सर्ती हेर्दा ती सबैका कुराले कांग्रेसको नेतृत्वलाई दोषी देखाइ रहेको थियो ।
म आफु पनि लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने भएकोले पनि कांग्रेस र कांग्रेसका गतिविधिलाई प्राय नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छु । यसरी आफुले आफैलाई घोत्लिएर सोच्दा पनि धेरै कांग्रेसको चुनावी परिणामले कांग्रेसको नेतृत्वलाई सवाल गरि रहन्छ । स्वाभाविक रुपमा एक अमुक पार्टीले जित्दै गर्दा या हार्दै गर्दा त्यस्को जस या अपजस त पाउछ नै , अहिले मुलुकको ठुलो पार्टी हुदै गर्दा यस्मा अन्य नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको भए पनि पार्टीलाई यस स्थानमा ल्याउन एमाले अध्यक्षको नै नाम पहिले आउछ । यस्तैमा कांग्रेसले आज हार्दै गर्दा स्वाभाविक रुपमा कांग्रेस नेतृत्व प्रति प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन ।
साँच्चिकै ती चिया पसलमा भनेको कुरालाई बिश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्व तहमा केहि बिचलन आएको कुरालाई भेट्न सकिन्छ । पार्टीको बिधान अनुसार पार्टी चल्न नसकेको देखि पार्टीले पुर्णता पाएर जिबन्त बन्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । नेतृत्व तहमा नेताहरूले गर्ने आफू खुशीका निर्णयले कांग्रेसलाई निकै असहज बनाएको देखिन्छ । गुटबन्दीपुर्ण राजनीतिले कांग्रेसलाई तग्रीन नसक्ने गरि बेरेको र आफुलाई स्थापित गराई राख्न गुटबन्दी राजनीति गर्दा प्रतिभाशाली ब्यक्तिहरु पछि परिरहेका छन ।
नेतृत्व तहले गरेका केहि अबिबेकपुर्ण निर्णय जो देउवा भन्दा अगाडि देखिनै कांग्रेसप्रति आम नागरिकको बितृष्णा बड्दै गएको थियो । सुशील कोइरालाको हार्ने प्रधानमन्त्रीमा देखाएको रुचि , देउवामा आइपुग्दा आइजिपी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग , राजदुत नियुक्ति जनता स्तर सम्म निकै निराश बनाएका निर्णय थिए । यस्तै स्थानीयतह देखि प्रदेश र संघको चुनाबसम्म आउदा टिकट बितरणको कुराले पनि राम्रै बहसको ठाउँ पायो र कांग्रेसका कार्यकर्ता सुभेच्छुक रुष्ट हुन पुगे ।
कांग्रेस र कांग्रेसीलाई फरक फरक देख्ने गगन थापाको विश्लेषण मुताबिक धेरै कांग्रेस पक्तिहरुले कांग्रेसको यि पछिल्लो राजनीतिक घटनाहरु लाई सुक्ष्मदृष्टिले हेरि रहेका थिए र यो निर्वाचन मार्फत त्यस्को जवाफ दिए । अब यता कांग्रेसीहरु भने यसरी कांग्रेसले जसरी जवाफ दिन सक्दैन थिए , त्यसैले आफ्नो युबा समूह बनाई आफू र कांग्रेस परिवर्तनको लागि आफुलाई एकजुट बनाएर लैजान कोसिसमा थिए । बिपिलाई सम्झिदै मेलमिलाप दिबसको दिन पार्दै कांग्रेस परिवर्तनका लागि बिज्ञप्ति जारी गरे ।
फाइल फोटो: नवनियुक्त कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेसका बौद्धिक युबाहरु त्यस्मा पनि लोकप्रिय मानिएका युबाहरुको यस कदमले कांग्रेस शुभचिन्तकहरुमा उत्साह बढाएको थियो । यसैमा कांग्रेस नेतृत्वबाट युबाहरुलाई अबसर दिने कुरालाई मान्दै त्यो बौद्धिक युबा समूहबाट विश्व प्रकाश शर्मा लाई सभापति देउवाले दुई बर्षदेखि रिक्त रहेको पार्टी प्रबक्ता बनाए । पार्टीमा दोस्रो पुस्तालाई अबसर दिन पर्छ भनी रहेका बेला शर्मा पार्टीको जिम्मेवार पदमा त पुगे तर कांग्रेस शुभेच्छुकहरुमा केही अन्योलता रहेको रहेको छ ।
पुरानो संरचना परम्पराबादी सोचमा रहेको कांग्रेसलाई अहिले एक युबा शर्माको उपस्थितिले खासै फरक नपार्ने देखिन्छ । अहिलेको कांग्रेसको जुन संरचना र नेतृत्व छ त्यस्मा नेपाली नागरिक पुर्ण असन्तुष्ट छन । बिश्वप्रकाशसहित अन्य युबाहरुले कांग्रेसलाई परिवर्तन गरेर छाड्ने बताइ रहदा अब शर्मा देउवा संरक्षणमा पुगे र अलमलिए भने बाँकि युवाहरुको भुमिका कस्तो रहन्छ भन्नेमा धेरै कांग्रेस शुभेच्छुक र कार्यकर्ता शंकामा छन । युबा पङ्ग्तिबाट शर्मालाई प्रबक्ता दिएर अलमल्याउने अनि अर्का लोकप्रिय ब्यक्ती गगन थापालाई पार्टीको अनुशासन पालन नगरेको भनेर कारबाही गर्ने सम्मका कुराले यो युवाहरुको एक मेजोरिटीलाई भत्काउन खोजेर कांग्रेसलाई यथास्थितिमा राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता भर्खरै नियुक्त भएका बिश्वप्रकाश शर्माले भन्ने गरेको एक अभिव्यक्ति `कांग्रेस अहिले घाटमा हैन हस्पिटलमा छ , त्यहाँ कांग्रेसको सहि उपचार भयो भने फेरि पुनर्जीवनसहित आउने छ ´ उपचारको क्रममा हस्पिटल पुगेको कांग्रेसको सामान्य औषधि उपचार गरेर निको पार्ने होकि ठूलो मेजर अप्रेसन गर्न पर्ने हो त्यो त्यहाँका डाक्टरहरुले पत्ता लगाउछन र त्यसै अनुसार गर्न पर्छ´।
शर्माले भन्ने गरेको कांग्रेसको उपचार गर्ने ठाउँमा अब शर्मा आफै पुगेका छन । अब आफै डाक्टर भएर उपचार गर्ने ठाउँमा पुगेका शर्माले कांग्रेसलाई कुन किसिमको बिराम लागेको हो र हस्पिटल सम्म आइ पुगेको हो र यस्को उपचार कसरी गर्छन् हेर्न बाकी छ ।
हाम्रो पुरातनबादी समाजमा बिश्व प्रकाशले कांग्रेसलाई हस्पिटलमा उपचार नगराई फेरि धामीझाँक्रीकोमा लगेर पो ठिक पार्ने कोसिस गर्ने हुन कि भन्ने सवालहरु पनि उठ्न थालेका छन । अबश्य कांग्रेस बिरामी मात्र भएर हस्पिटल पुगेको भए आफू डाक्टर भएर त्यहाँ पुगि सके पछि बिरामी कांग्रेसको रोग पत्ता लगाइ सम्बन्धित रोगको विशेषज्ञलाई ल्याएर त्यस्को उपचार गराउन सक्नु पर्दछ ।
आजको दिनमा कांग्रेसमा लागेको रोग के हो भनेर प्राय सबैले आकलन गरेको रोग भनेको उसको मनोबिज्ञान हो । उसले कार्य सम्पादन गर्ने गरेको शैली हो । यसलाई परिवर्तन गरि परिबर्तित समयको माग अनुसारको मनोबिज्ञान कांग्रेसमा बसाउन जरुरी छ । कांग्रेसले आफुलाई कहिले चिन्न सकेन भन्नेसम्मको ब्याख्या गर्न थालेका छन बिश्लेषक हरुले । यस हिसाबले हेर्ने हो भने कांग्रेसले पहिले म मुलुकको लागि के हु , आम नागरिकले कसरी कांग्रेसलाई हेर्ने गरेका छन र आम नागरिकले कांग्रेसबाट के अपेक्षा राखेका छन भन्ने बिषयमा बहस गर्न जरुरी छ ।
कांग्रेस सधै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने पार्टी हो , भन्दै गर्दा उसले अहिलेसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरु कति जनचाहाना अनुरुप भए भन्ने बिषयमा कांग्रेस सधै चुकी रहेको छ । यसैले कांग्रेसले जनताको मनोबिज्ञानलाई बुझ्न नसक्दा उसलाई नै आजका दिनमा मनोबिज्ञानको रोग लागेको छ । यसको उपचारका लागि आज कांग्रेसलाई जनताको मनोभावना चाहिएको छ । आज आफू परिवर्तन भएर कांग्रेसलाई परिवर्तन गराउने सपना देखेर युबाहरुलाई उत्साह थप्दै गरेका बिश्वप्रकाशले अबसर पाएका छन । यसको सहि सदुपयोग गर्दै कांग्रेस शुभेच्छुकहरुको मन जोडेर जान सक्ने क्षमता बिश्वप्रकाशमा हुन जरुरी छ ।
प्रवक्ता शर्मासंगै जोडिएर आउने गरेको अर्को नाम हो बिश्व प्रकाश ( बिपि ) । धेरै मानिसले बिश्वप्रकाशबाट ती ( विश्वेश्वर प्रसाद ) बिपिको संकल्पलाई जोडेर हेर्ने गरेका छन । आज कांग्रेसको प्रवक्ता भएर जादै गर्दा ऊनीसंग बिपिसंग आफ्नो नाम मिल्नु र जनताको अपेक्षा त्यही अनुरुप हुनुलाई पनि उनले गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी छ । बिश्व प्रकाशका अगाडी अब बिश्व प्रकाश बाट बिपि हुने या देउवाले दिएको प्रवक्ताबाट मुकदर्शक बनि उनैको कार्यकर्ता बनेर बस्ने भन्ने बिषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।